Diyaarad Milatari oo ruushka oo siiriya ku sii jeeday oo burburtay? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Diyaarad Milatari oo ruushka oo siiriya ku sii jeeday oo burburtay?
Diyaarad Milatari ay leedahay Dowlada Ruushka kuna sii jeeday dalka Siiriya ayaa ku bur burtay meel ku dhaw Badda Madow xili ay Diyaaradaasi ka duushay garoon kuyaala magaalada Sochi ee dalka Ruushka.
Sida ay baahinayaan Warbaahinta dalka Ruushka diyaaradan ayaa siday 91-qof oo u badnaa koox shaqaale adeegayaal ah oo katirsanaa Milatariga Dowlada Ruudshka, waxaana Diyaaradan bur burtay ay kusii jeeday gobolka Latakia ee dalka Siiriya.
Wasaarada Gaashanadhiga Ruushka ayaa sheegtay in diyaarad milatari oo nuuceedu ahaa Tu-154 ay ku bur burtay meel 1.5 Km u jirta xeebta badda badow ee magaalada Sochi, diyaaradan ayaana inta aysan bur burin kahor hawada laga waayay mudo 20-daqiiqo.